Dhuusamareeb: Maamulka Ahlu Sunna oo ka hadlay sababta uu u baaqday RW Sharmaarke – Gedo Times
Dhuusamareeb: Maamulka Ahlu Sunna oo ka hadlay sababta uu u baaqday RW Sharmaarke
Maamulka Ahlu Sunnada goballada dhexe ayaa ka hadlay sababta keentay dib u dhaca ku yimid safar Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Somalia lagu waday inuu maanta ugu ambabaxo magaalada Dhuusamareeb.
Sida uu qorshaha ahaa wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Cumar Cabdirashiid Cali ayaa lagu waday inuu gaaro maanta magaalada Dhuusamareeb oo ay hadda ku sugan yihiin Ahlu Sunna Waljamaaca hase yeeshee taas ma aynaan dhicin oo waa uu baaqday R/wasaaruhu.
Madaxweynaha Ahlu Sunna ee goballada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in RW Sharmaarke uu u soo gudbiyay cudurdaar taasna ay keentay dib u dhaca safarkiisa maanta la filanayay.
Maamulka goballada dhexe ayaa dhowr jeer ku celceliyay in aysan wada shaqeyn kala dhaxeynin dowladda dhexe ee dalka iyagoo u cuskanaya in aysan siinin aqoonsi maamul gobaleed oo ay dalbadeen kadib markii la dhisay dowlad gobaleedka Galmudug oo hadda si KMG ah ugu shaqeynaya magaalada Cadaado.
Uhuru Kenyatta oo mar kale ka hadlay go’aanka lagu xidhayo xeryaha qaxootiga
Photo News: Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Lugadheere oo furay Imtixaanka Shahaadiga ee Saaka ka biloday Degmada Kismaayo